आजदेखि राजपा अध्यक्षमण्डलको संयोजकमा अनिल झा ! « Nepal Bahas
आजदेखि राजपा अध्यक्षमण्डलको संयोजकमा अनिल झा !
प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार ०८:५३
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ‘राजपा’ को अध्यक्ष मण्डलको संयोजकको जिम्मेवारी सोमबार ‘आज’ देखि अनिलकुमार झाले सम्हाल्ने भएका छन् । राजपाको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले नेता झालाई संयोजक बनाउने निर्णय गरेको अध्यक्षमण्डलका संयोजक शरत्सिंह भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पार्टीको अध्यक्ष मण्डलको संयोजक चक्रिय प्रणालीअनुसार परिवर्तन हुने प्रावधानका सम्बन्धमा झाले जिम्मेवारी पाएको हो । संयोजक भण्डारी अवधि आइतबारबाट सकिएको छ ।